Soo-saareha Iibka ee Guri Guri Loogu Talagalay | James Bond
Alaabta guriga James Bond waxay diiradda saareysay alaabta guryaha ee caadiga ah 17 sano.
Miiska Qaxwada Classic
Golaha Classic Tv
Miiska Gaariga Qadiimiga ah
Guddoomiyaha Cuntada Qadiimiga ah
Gudoomiyaha Madadaalada Madxafka
Qalabka dhismaha ee James Bond waxaa la aasaasay 2003 aasaasiga caanka ah ee soosaarka alaabta guryaha - magaalada Longjiang, degmada shunde, magaalada foshan, oo dabooleysa in kabadan 50,000 mitir oo laba jibbaaran ， taas oo ah wax soo saar, iibinta guryaha sareeya ee fadhigoodu yahay Yurub. , miis, shaxda taxanaha miiska shaaha ee shirkadaha gaarka loo leeyahay. Muddo 16 sano ah, James Bond wuxuu u hoggaansamayaa heerar anshaxeed oo joogto ah, Waxaa loo habeeyay qaadashada caadooyinka, dhaqanka shirkadaha hufan iyo moodalka horumarinta joogtada ah, iyo Helitaanka aqoonsi ka imanaya warshadaha, wuxuu ku guuleystay "10-ka ugu sareeya warshadaha fudud ee Shiinaha", "qandaraas qaran iyo Shirkad deyn ah "," Guangdong gobolka 15 sano oo isku xigta si ay u hogaansanto qandaraaska iyo shirkadaha amaahda ah "" Tobanka shirkadood ee ugu waaweyn Yurub iyo Mareykan ee alaabta Shiinaha ".
Qalabka James Bond wuxuu asal ahaan ka soo jeeday Talyaanigu oo leh dhiig sharaf leh, u hoggaansan dhaqanka, xulashada adag ee qalabka, la safeeyey, iyadoo la adeegsanayo hanaanka wax soosaarka Talyaani, si loo hubiyo tayo wanaagsan. Laga soo bilaabo alwaaxa dabiiciga ah ee saafiga ah ilaa dusha sare ee rinjiga dhalaalaysa oo dhalaalaya oo dhalaalaya, guddi qaali ah oo naadir ah ... Iyada oo aan ka reebanayn xariifnimo miyir beel oo xariif ah iyo farshaxanimo dhaqameed, haweyshu ha noqdaan jawharaha qurxinta ee qurxiya guriga. James Bond farshaxanka gacantu wuxuu dhaxlaa boqolaal sano oo ah farshaxan iyo hiddaha dhaqanka, wuxuu abuuraa xamaasad iyo dhiirigelin xagga abuurista fanka, wuxuuna iskudayaa inuu abuuro shaqooyinka farshaxanka ugu fiican.
Qalabkayaga qadiimiga ah waxay xoojin karaan quruxda booska, waxay ka dhigi karaan meesha caadiga ah inay noqdaan dhalaalaya, waxay kor u qaadi karaan sumcadda maqaarka iibsadayaasha, alaabada qadiimiga ah waa sida farshaxanka, ma isticmaali karno oo keliya, laakiin sidoo kale waan ku raaxeystaa!
Alaabada guriga James Bond waxay diiradda saarayaan alaabta qadiimiga ah muddo 16 sano ah, waxaan dooranay alwaax Faransiis ah si aan u soo saarno alaabada caadiga ah, sababtoo ah adkaanta sare ee alwaaxa Faransiiska, sidaa darteed alaabta guriga ayaa noqon doonta mid waarta.
Xarkaha alwaaxa dabiiciga ah ee saafiga ah ilaa dusha sare ee rinjiga dhalaalaysa oo dhalaalaya oo dhalaalaya, guddi qaali ah oo naadir ah
Ma haysaa wax su'aalo ah?
Waxaa naga go'an inaan soo saarno alaabada ugu tayada wanaagsan qiimaha ugu tartan badan. Sidaa darteed, waxaan si daacadnimo leh ugu martiqaadeynaa dhammaan shirkadaha xiiseynaya inay nala soo xiriiraan wixii macluumaad dheeraad ah.